Magangalyo doonka oo lagu eedeeyay tuuganimo iyo dagaal | Somaliska
Magangalyo doonka ku xaraysan kaamka ku yaala kamuunka MÖNSTERÅS ee u dhow Kalmar ayaa lagu eedeeyay in ay tuugo nimo iyo dagaal ku soo siyaadiyeen magaalada yar. Shaqaalaah dukaanka COOP ayaa cabasho weyn ka muujiyay dabeecada magangalyo doonka.
Magangalyo doonka ayaa la sheegay in ay tuugo ugu dhaqaaqeen dukaanka COOP oo markii lagu qabtay dabeecada qaldan ay gadaal la galeen shaqaalihii dukaanka ka shaqeynayay, arintaas ayaa dhalisay in dhowr jeer Booliska loo waco balse taas xitaa xal ma keenin.
Laanta Socdaalka (Migrationsverket) ayaa ku qasbanaatay in ay dukaanka COOP u kireyso waardiye joogto ah oo ay qarashkiisa qabaan. Shaqaalaha dukaanka ayaa sheegay in ay la soo daristay cabsi ka dib markii gacanta loola tagay markii ay qabteen dadka oo tuugo sameynaya. Maamulaha dukaanka ayaa sheegtay in aysan waligeed xaaladu sidaan noqon.
Dadkaan tuukada sameynaya ayaa la sheegay xitaa in aysan ka cabsaneyn ama ka war hayn kaamirooyinka waardiyaha ee ku xiran dukaanka. Si kastaba ha ahaatee dabeecada magan galyo doonka ku xareysan kaamka MÖNSTERÅS ayaa magac dil weyn u soo hooyay magangalyo doonka oo lagu shaabadeeyay in ay yihiin dadka tuugo u yimid Sweden.
waa arrin laga naxo sababtoo ah dadka xerada ku jiraa ee tuuga ah, oo weliba laga yaabo in ey hiyiin dhowr qof oo keli ah waxaay sitaan ama ka musuulyihiin 2.6 millin qof ee ajaaniibta ah ooo ku nool dalka sweden, sababtoo ah marka saxaafadu soo qorto qof xero qaxooyi ku jiraa ayaa tuug noqday dadka swedishka ah waxaa ku soo dhaceysa madaxooda malaha midkaa soomaliga ah waa tuug malaha midkaa carabka ah waa tuug malaha soo galooti oo dhammi waa tuugo iwm, marka qof kasta oo sweden jooga ha oggado in uu masuul ka yahay sharaftiisa iyo midda dadka kale oo ku nool sweden hana ogaado in waxaa uu sameyo oo xumaan ah lagu dhibaateyn doono midkale oo aan wax xubaan ah geysan, sidoo kale wixii wanaag ah ee uu sameyana lagu sharafi doono mid aan wax wanaag geysan ama aan hadda dalka joogin ama ilmihisa. mahadasindin dhammantiinba
wlhi waa arin mucjiso ah ilahoow ceebta astur
kkk wlh waa ariin yaab lah
Kkkkk wlhi waa arin ceebteda wadata
As aqyaarta dhamaan arrintaan waa mid ay sameeyaan dad qalad ka aminsan sharciga sweden,sida iney dhahan marka la qabto lacagta nala siiyo managu filno ama wax la mid ah,taasna waxay ceeb ku tahay dhamaan dadka soo galootiga ah,